Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Saint Kitts iyo Nevis Breaking News » Socdaalka bilaa fiisaha ee Falastiin ilaa St Kitts iyo Nevis hadda
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Caribbean • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • News • Wararka Falastiin • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Saint Kitts iyo Nevis Breaking News • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka
Socdaalka bilaa fiisaha ee Falastiin ilaa St Kitts iyo Nevis hadda.
Falastiin waa waddankii afaraad oo xiriir diblomaasiyadeed la sameeya St Kitts iyo Nevis kadib Burkina Faso, Gabon, iyo Masar afartii toddobaad ee la soo dhaafay.
Dalxiiska St Kitts iyo Nevis ayaa duubaya heshiiskii afraad ee diblomaasiyadeed wax ka yar afar toddobaad.
Ka-dhaafitaannada fiisaha-la’aanta ah ayaa u oggolaanaya socdaalka aan xaddidnayn ee muwaadiniinta waddammada saxeexay heshiiska.
Fursadani waxay kaloo gaartaa shakhsiyaadka ku helay dhalashada hab dhaqaale.
Premier Nevis iyo Wasiirka Arrimaha Dibadda ee St Kitts and Nevis, Hon. Mark Brantley wuxuu si firfircoon u dhisayay xiriirka caalamiga ah bishii la soo dhaafay.
Intii lagu guda jiray xuska sannad-guurada 60-aad ee Dhaqdhaqaaqa Is-bahaysiga ee Serbia toddobaadkan, Wasiir Brantley ayaa heshiis ka-dhaafis fiiso la’aan ah la saxiixday Falastiin.
Palestine waa ummaddii afaraad ee xiriir rasmi ah la yeelato St Kitts iyo Nevis kadib Burkina Faso, Gabon, iyo Masar afartii toddobaad ee ugu dambeysay.
“Waa maalin taariikhi ah oo loogu talagalay St Kitts iyo Nevis markii aan la saxiixanay [a] heshiis ka-dhaafitaan fiiso is-weydaarsi oo uu la yeeshay Mudane Riad Maliki Wasiirka Arrimaha Dibadda [ee] Dawladda Falastiin oo u oggolaanaysa socdaalka fiisaha-la’aanta ah ee u dhexeeya labadeenna shacab. St Kitts iyo Nevis waxay sii wadaan inay ballaariyaan raadkooda diblomaasiyadeed ee adduunka, ”ayuu Wasiir Brantley ku qoray Instagram -ka.
Ka-dhaafitaannada fiisaha-la’aanta ah ayaa u oggolaanaya safarka xaddidaadda-la’aanta ah muwaadiniinta waddammada saxeexay heshiiska. Tani waxay ka dhigan tahay in fiisaha gelitaanka aan looga baahnayn muwaadiniinta labada dal ka hor inta aysan soo gelin waddanka heshiiska la saxiixay. Mudnaantaani waxay sidoo kale ku fidaysaa shaqsiyaadka ku helay muwaadinimo hab dhaqaale, sida St Kitts iyo NevisBarnaamijka Jinsiyadda ee Maalgashiga (CBI).
The Xaaladda Falastiin. Si kastaba ha ahaatee, iyadoo malaayiin Falastiiniyiin ah ay ku dul nool yihiin xasilooni darro siyaasadeed awgeed, qaar badan ayaa la kulma dhibaato xagga socdaalka caalamka ama xitaa dib ugu noqoshada dalkooda.
Iyada oo loo marayo heshiiskan “taariikhi ah”, qurbajoogta Falastiiniyiinta iyo ganacsadayaasha doortay in ay ka qaybgalaan Barnaamijka St Kitts iyo Nevis 'CBI ayaa guud ahaan u safri kara fiiso la'aan maaha Falastiin oo keliya laakiin waxay tegi karaan ku dhawaad ​​160 dal iyo dhulal, oo ay ku jiraan waxbarashada dhexe iyo xarumaha ganacsiga.